अभिनेता दिलीप कुमारले जब आफ्नै प्रेमिकाविरुद्ध बयान दिए, त्यसपछि — Imandarmedia.com
अभिनेता दिलीप कुमारले जब आफ्नै प्रेमिकाविरुद्ध बयान दिए, त्यसपछि
काठमाडाैं । बलिउडका ट्रयाजिडि किंग अर्थात दिलीप कुमारको जीन्दगी कुनै फिल्मको कथा भन्दा कम छैन । फिल्मी पर्दामा होस् चाहे असली जीन्दगीमा उनले सँधै विछोडका अनुभवहरु भोगे । दिलीपको निजी जीन्दगीको कुरा गर्दा बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री मधुवालासंगको सम्बन्ध चर्चामा रहन्छ ।
सन् १९५१ रिलिज भएको हिन्दी फिल्म तरानाबाट दिलिप र मुधवालाले एकसाथ काम गरे । यहिबाट उनीहरुको मित्रता शुरु भयो । जो बिस्तारै प्रेममा बदलियो । मधुवाला दिलिपसंग विवाह गर्न चाहान्थिन् । तर भनिन्छ नि प्रेमको बाटो सहज हुदैन । सायद त्यसैले होला दिलीप र मधुवालाले प्रेममा निकै हण्डर भोगे ।
मधुवालाका परिवार यस सम्बन्धका लागी तयार थिएनन् । मधुवालाका पिता अताउल्लाह खान यस सम्बन्धको विरोधमा थिए । उनको विरोधका वाबजुद यि दुबैले बी.आर. चोपडाको फिल्म नयाँ दौरको सुटिङ थाले । यस फिल्ममा दिलीप र मधुवाला लीड रोलमा थिए ।
फिल्मको एक सुटिङका लागी दुबैले भारतको मध्य प्रदेश जानु पर्ने भयो । जसका लागी मधुवालाका पिता राजी थिएनन् । उनी दिलीपसंग जादाँ सम्बन्ध बढ्ने भन्दै यसको विरोधमा उत्रिए ।
सम्झौता पत्रका आधारमा बी.आर. चोपडाले सुटिङ स्पोट जान नचाहेकी मधुवालाका विरुद्धमा अदालतमा उजुरी दिए । अदालतमा पेशीका क्रममा दिलीपले बि.आर. चोपडाको पक्ष बयान दिए । अन्ततः मधुवालाले केश हार्ने भइन् ।
मधुवालाको पक्ष कमजोर भएका कारणले उनी जेल जाने सम्भावना समेत बनेको थियो । तर त्यसो हुन पाएन । मन ठुलो देखाउदै बि.आर. चोपडाले उजुरी फिर्ता लिए ।
तर यहि घटनाले दिलीप र मधुवालाको सम्बन्धलाई नराम्रो प्रभाव पार्यो । यी दुबैको सम्बन्ध बिग्रियो । मधुवाला चाहान्थिन् दिलीपले अदालतमा आफ्नो पक्ष लिउन् तर उनले बि.आर. चोपडाको पक्ष लिए । यता दिलिपका फ्यान उनको यहि कदमलाई सत्य मान्दै उनको प्रसंशक रहे ।